लोकसेवा तयारीः थाहापाउनुस्, केही ताजा महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्नहरुको उत्तर – Everest Dainik – News from Nepal
लोकसेवा तयारीः थाहापाउनुस्, केही ताजा महत्वपूर्ण विषयगत प्रश्नहरुको उत्तर
आर्थिक विकास अर्थतन्त्रको समग्र विकास हो । आर्थिक वृद्धि दर उच्च, दिगो, फराकिलो, समावेशी तथा न्यायिक भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(घ)(१) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । विकास सहायता नीति, २०७१ ले निजी क्षेत्रलाई विकासको एक प्रमुख साझेदार स्वीकार गरेको अवस्था छ । चालू योजनामा मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रष्ट गरिएको छ र पनि नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सन्तोषजनक भएको पाइँदैन ।
अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति, लगानीको प्रतिकूल वातावरण, सरकार र लगानीकर्ताबीच अविश्वास, कानुनी जटिलता, ऊर्जा सङ्कट आदि कारणले नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन, जसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । समग्रमा नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निम्नानुसार रह्यो-
– मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन ।
मानिस आपूm बसेको गाउँ, ठाउँ वा देश छोडेर अर्को गाउँ, ठाउँ वा देशमा सर्ने कार्यलाई बसाइँसराइ भनिन्छ । बसाइँसराइ एक प्रकारको स्थानान्तरण हो । मानिस सामान्यतयाः सुविधाका लागि बसाइँ सर्दछन् । बसाइँसराइ एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन तर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न उद्गम र गन्तव्य दुबै स्थानमा विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
१. हिमाल÷पहाड प्रति विकर्षण । गरिबी, बेरोजगारी, कम उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कमी ।
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्नु फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो । फाइलिङका अरू उद्देश्य निम्न छन ः
कागजातहरू सुरक्षित हुने गरी फाइलमा मिलाएर राख्ने कार्य फाइलिङ हो । फाइलिङ बिभिन्न तरिकाले राख्न सकिन्छ । तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, धरातलीय फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ आदि तरिकाले पनि कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ । सामान्यतयाः फाइल निम्न तरिका अबलम्बन गरी राखिन्छ-
यसमा फाइलको नाम नेपाली वर्णमाला क, ख, ग वा अङ्ग्रेजी ए, बी र सीको क्रममा राखिन्छ । जस्तै, कृषि सामाग्री कम्पनी लि. ‘क’ बाट, खाद्य संस्थान ‘ख’ बाट ।
जीवित प्राणी एवं वनस्पतिहरूको बासस्थान र तिनको वङ्शाणुगत गुणको जगेर्ना गर्नु जैविक विविधता संरक्षण हो । हिमाल, पहाड र तराईमा विभक्त नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विविधतामा पनि भिन्नता छ । यिनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ ः
सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक सेवा ग्रहण गर्ने नागरिक सेवाग्राही हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीका दायित्व धेरै हुन्छन् । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ-
सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक जनकल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरी उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्य निम्न छन्-
 वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने । गाेरखापत्रबाट